आफ्नै कुरा – Ram Kumar Pariyar
२०७३ असार १२
आज आफ्नै बारेमा लेख्दै छु
मलाई राम्ररी चिन्ने साथीहरू पित्रुके भन्नुहुन्छ । किनकी मलाई सानोतिनो कुराले पनि चित्त दुखी हाल्छ । कसैको दु:ख देखेँ भने आँसु खसी हाल्छ । बरु दुई वचन सहन्छु , फर्काउन चाहन्न । बरु एक्लै रुन्छु । कसैसँग पनि नराम्रो नहोस भन्ने मेरो चाहना ।...
२०७३ बैशाख १
नयाँ वर्षको शुभकामना !!!
नयाँ वर्ष २०७३ सालको पुनित अवसरमा तपाईं लगायत तपाईंको परिवारमा सुख , शान्ति , सम्वृद्दी एवं उत्तोरत्तर प्रगतिको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यहाँका हरेक ईच्छा , चाहना एवं योजनाहरु सफल हुन , मुलुकमा जारी राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होस , सम्पुर्ण नेपाली बिच भाईचारा...
२०७१ पुष ३०
आज माघ १ गते अर्थात मकर संक्रान्ति,माघी पर्व तथा ‘घ्य: चाकु सन्हु’ । यो सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरा सम्पुर्ण ईष्टमित्र,आफन्तजन एवं शुभचिन्तक हरुलाई मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु !!! साथै सम्पुर्ण थारु समुदाय र नेवारी समुदायका दाजुभाई,दिदीबहिनी हरुलाई आ-आफ्नो पर्व हर्सोल्लास का...
२०७१ पुष २४
‪म के भन्छु भने ‎ जसले जे भनोस,केपि ओलि जस्ता अझै दुईचार नेता हुने हो भने उहिले संविधान बनिसक्ने थियो । एउटा स्पष्ट अडान भएको , प्रष्ट बोल्ने र बहादुर नेता हुन ओलि । उनले हिजो,अस्ति जे बोले एकदम सहि बोले । साच्चिकै हो माओवादी,मधेसी...